Konke odinga ukukwazi ngezinkathi zonyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba wazi, unyaka ogcwele eMhlabeni unezinkathi ezine: ukuwa, ubusika, intwasahlobo nehlobo. Ukuba khona kwezinkathi kungenxa ye- ukunyakaza komhlaba ekuzungezeni kwalo elizungeze iLanga. Ngokuya ngobude nokuphakama lapho singaphakathi kweplanethi, izinguquko ezimeni zezulu nakwezulu zingaba ubuncane noma zibe ziningi. Okusho ukuthi, kungaba khona izinkathi zonyaka okuphawuleka kakhulu nokwehluka noma okunye okufana kakhulu.
Lapha sizochaza konke odinga ukukwazi ngezinkathi zonyaka ngokuningiliziwe ukuze konke ukungabaza kuxazululwe.
1 Izinkathi zonyaka nokubaluleka kwazo
2 Izimbangela nemiphumela
3 Ama-Solstices nama-equinox
4 Ubudlelwano bomjikelezo woMhlaba neziteshi
Izinkathi zonyaka nokubaluleka kwazo
Ezifundeni maphakathi nobubanzi beplanethi, isimo sezulu sishintsha kakhulu unyaka wonke. Iziteshi zesimo sezulu zinezici ezicishe zifane kuzo zonke izingxenye zaleli latitude. Izinguquko emazingeni okushisa, imvula, imimoya, njll. Zithinta ukubukeka komhlaba, ngoba futhi kuhlanganiswe ne- i-phenology wezinto eziphilayo ezihlala kuzo.
Isimo sendawo siyathinteka nasezindaweni ezisemadolobheni kwazise nemisebenzi yabantu iyashintsha nezinkathi zonyaka. Akufani ukubona izindawo ezisogwini maphakathi nehlobo kunasebusika. Kokubili imisebenzi nokuhlobisa nokuba khona noma ukungabikho kwezixuku zabantu emabhishi kuguqula ukubukeka komhlaba.
Ngokuvamile, Sikhuluma ngezinkathi ezine zonyaka ezinesikhathi sezinyanga ezintathu noma ngaphansi. Kunezindawo emhlabeni wethu ezinezinkathi zonyaka ezimbili kuphela ngonyaka: enye imanzi enye yomile. Lokhu kwenzeka, ngokwesibonelo, ezindaweni zemvula. AmaMonsoon yimvula eningi ezindaweni ezishisayo. Zenzeka ngesikhathi esithile sonyaka futhi zidala izikhukhula ezinzima.
Sizokwazi ukuthi yini ebangela izinkathi zonyaka nokuthi ikhiqiza miphi imiphumela empilweni eMhlabeni. I-eksisi yethu ithambekele maqondana nendiza yomzila ohamba uzungeze iLanga cishe ngama-degree angama-23. Lokhu kusho ukuthi ezinye izindawo zomhlaba zithola amanani ahlukile elanga ngezikhathi ezahlukahlukene zonyaka.
Ukwehluka kwesimo sezulu okunezingxenye ezahlukahlukene zeplanethi kwehlukaniswa kakhulu ezindaweni ezibandayo nezipholile futhi ezinamandla ezindaweni ezishisayo. Isibonelo, lapho sisondela enkabazwe, kuba nokwehluka okuncane kwesimo sezulu unyaka wonke. Lokhu kungenxa yokuthi cishe ngaso sonke isikhathi bathola ukukhanya kwelanga okulinganayo, noma ngabe sisezikhundleni ezahlukahlukene maqondana nelanga emzileni.
Izikhathi zonyaka zivame ukuhlukaniswa nezikhathi zezulu. Lezi zikhathi zihlala cishe izinyanga ezintathu futhi zincike ekuthambekeni kwe-eksisi yoMhlaba. Kungenzeka ucabange ukuthi ehlobo kuyashisa ngoba iplanethi yethu isondelene neLanga. Kodwa-ke, akunjalo. Ngokuphambene, i- ibanga ukusuka eMhlabeni kuya eLangeni mkhulu ehlobo kunasebusika. Konke lokhu sikubhekise enyakatho Nenkabazwe. Noma kunjalo, njengoba ebusika kukhona ukuthambekela okukhulu kwemisebe yelanga, amazinga okushisa aphansi.
Izinkathi zonyaka zingu-4: entwasahlobo, ehlobo, ekwindla nasebusika. Kokubili kokuqala sinezici zosuku olude ukudlula ubusuku, kanti kwezinye ezimbili kuphambene. Njengoba ukwehluka kwesimo sezulu esesikubalile kungenxa yokuthambekela kwe-eksisi yomhlaba, akwenzeki enyakatho Nenkabazwe njengaseningizimu. Womabili la ma-hemispheres anemiphumela eguquliwe. Uma kusehlobo enyakatho yenkabazwe, eningizimu yezwe kuba sebusika. Singabona futhi ukuthi, lapho intwasahlobo iqala kwenye inkabazwe, ekwindla iqala kwenye.
Njengoba uMhlaba uhamba ne-axis yeNorth Pole itshekele ngaseLangeni, iSouth Pole yenza okuphambene. Lokhu kusho ukuthi izifunda ezisenyakatho zithola imisebe yelanga eningi kunalezo eziseningizimu.. Le nqubo ihlehlisiwe futhi izindawo ezisenyakatho ye-hemisphere zithola ukushisa okuncane njengoba izinsuku ziba mfushane futhi imisebe yelanga iyehla.
Iziteshi zezinkanyezi zinqunywa yizindawo eziyisi-4 zokuzungeza komhlaba elizungeza ilanga. Lezi zikhundla zibiziwe i-aphelion ne-perihelion yibo ababangela ama-solstices asebusika y ehlobo futhi i ama-equinox omlomo bese uwa.
Lapho i-equinox yenzeka, imisebe yelanga ishaya ngokungathi sína ebusweni bomhlaba, ngakho iwela iqonde enkabazwe. Ngakolunye uhlangothi, lapho ama-solstices enzeka, kwenzeka okuphambene nalokho. Okungukuthi, imisebe yelanga ishaya ubuso bomhlaba ngokuthambekela kwama-23,5 degrees. Lokhu kwenza indawo eshisayo yeCancer ehlobo kanye neTropic yasebusika yaseCapricorn.
Akuzona zonke izinkathi zonyaka ezihlala ngokufana. Lokhu kungenxa yokuthi umjikelezo ohanjwa uMhlaba uzungeza iLanga awuyisiyingi, kodwa uyindilinga. Lokhu kubangela ukuthi kubangele ukwehluleka. Umhlaba uhamba ngokushesha uma useduze neLanga futhi uhamba kancane uma ukude.
Ubudlelwano bomjikelezo woMhlaba neziteshi
Isikhathi ngasinye sonyaka asifani nenkaba ngayinye. Umhlaba useduzane nelanga ekuqaleni kukaJanuwari, kepha enyakatho Nenkabazwe sisebusika. Kodwa-ke, ekuqaleni kukaJulayi sikude nelanga, kepha enyakatho Nenkabazwe kusehlobo. Ihlobo elibusayo lishisa kancane kunelaseningizimu kanti ubusika abumnene.
Izinkathi zonyaka azihlali ziqala ngosuku olufanayo futhi ngasikhathi sinye ngenxa yochungechunge lokuphazamiseka uMhlaba ohlangabezana nakho njengoba uzungeza iLanga. Uma ufuna ukwazi kahle ukuthi inkathi ngayinye iqala nini, kufanele sizazise ngamakhalenda wethelevishini noma ezinkanyezi .
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinkathi zonyaka, ukuthi kungani zakheka nokuthi ziyini izici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izinkathi Zonyaka